Hantida Liibiya ee la Xaday: Sida Boqortooyada Ingiriiska ay uga Faa'iideysato Hantidii Dadka Liibiya. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Hantida Liibiya ee la Xaday: Sida Boqortooyada Ingiriiska ay uga Faa’iideysato Hantidii...
Hantida Liibiya ee la Xaday: Sida Boqortooyada Ingiriiska ay uga Faa’iideysato Hantidii Dadka Liibiya.
Mucamar Al Qadaafi iyo muwaadiniinta Liibiya midkoodna ma heli karaan lacag dhan 12 bilyan oo doolar oo ah madaxii hore ee dowladu ku lahayd Boqortooyada Midowday, laakiin Dakhliga Her iyo Kastamku wuxuu aruuriyay ku dhawaad ​​17 milyan oo canshuur ah hantidaas tan iyo 2016, sida lagu sheegay warbixintii ugu dambaysay ee Guddiga Arimaha Waqooyiga Ireland.
Siidaynta ayaa dhalisay in qaar ka mid ah sharci-yaqaannada Ingiriiska ay dalbadaan in London ay u isticmaasho lacagta ay ku kasbatay dulsaarka koontooyinka lacagiihii la hakiyey si ay magdhaw u siiyaan dhibanayaashii Ciidanka Jamhuuriga Republicans (IRA); Ururka waxaa la siiyay hub iyo waxyaabaha qarxa dowladda Qadaafi 1980-meyadii.
Kaddib geeridii Qadaafi ee 2011, UN waxay soo rogtay cunaqabateyn ka dhan ah hantida dowladda Libya, iyadoo si wax ku ool ah ula wareegtay lacag dhan $ 67 bilyan oo ka timid Hayada Maalgashiga Liibiya (LIA), oo lagu qabtay Yurub iyo Waqooyiga Ameerika.
Qiyaastii 16 bilyan oo yuuro ayaa lagu hakiyey Beljamka iyo $ 37 bilyan oo kale lagu hakiyey Mareykanka.
Su’aasha ayaa markaa soo ifbaxeysa: waa sharci in lacago laga qaado canshuuraha laga qaado hantida la hakiyey laga keenay ee dowlad kale? Sharci-dajiyayaasha Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa ka wada hadlay wararka Sputnik sharci ahaanshaha tallaabada London.
‘Waxba Kama Jiraan in bangigii Old-Fashioned la xadey’
Qareen Mareykan ah oo u ololeeya nabada Dan Kovalik ayaa yiri “aragtidayda majirto wax sharci ah oo arintaas ku saabsan”. “Tani waa lacag si sax ah u leh dadka reer Liibiya. Xaqiiqdii, waxay sameynayaan xaddi xatooyo ah oo ka imanaya dadka reer Liibiya, kuwaas oo runtii isticmaali kara lacagtaas kadib qarixii NATO ee Libya. Waxay ka tageen Liibiya dal burburay. Waxba kama qaban inay ka caawiyaan dib-u-dhiska. Kadibna xatooyada sidan oo kale ah … maahan oo keliya sharci-darro laakiin waa akhlaaq darro.
Kovalik wuxuu hoosta ka xariiqay inay u taal dowladda Liibiya sida loo qeybin doono hantida ka timid ee la xayiray ee ka ay la haayiin madaxdii hore ee libiya
“Xaqiiqdii, waa in loo gudbiyaa mas’uuliyiinta Liibiya kuwaasoo u baahan inay go’aan ka gaadhaan sida taasi loo qeybinayo; maahan awoodaha reer Galbeedka inay ka go’aan Liibiya waxa la sameeyo.”
Sida uu sheegayo qareenka, waxay noqon laheyd mid sharci ah haddii mas’uuliyiinta Liibiya ay dacwad ka gudbiyaan dowladda Ingiriiska maxkamadda si lacagtooda dib loogu celiyo. Si kastaba ha noqotee, wuxuu shaki ka muujiyey inay taasi dhici doonto goor dhow, maadaama Liibiya laga tegay iyadoo aan la helin dowlad qaran oo mideysan.
“Tani wax kale maahan laakiin boobki hore ee bangiyada,” ayuu yiri. “Uma maleynayo inay jireen waligood damac ah in lacagtaas dib loo celiyo.”
Maaha markii ugu horaysay ee si khaldan loo maareeyo hantida Qadaafi. Deyrtii 2018, dawladda Beljamka ayaa lagu eedeeyay inay bixisay dulsaar iyo saami qaybsi akoonada bangiga koontada. Kaddib geeridii Qadaafi ee 2011, ilaa 16 bilyan oo yuuro milkiilaha gumeysi ayaa lagu hantidiisii ayaa lagu hakiyey afar bangiyo Beljam ah iyadoo la raacayo qaraarkii Qaramada Midoobay. Si kastaba ha noqotee, baaritaan ay sameysay majaladda “Politico” ayaa muujisay “in si joogto ah uga baxa saamiyada saamiyada, dakhliga deynta iyo bixinta lacagaha dulsaarka ah ee loogu talagalay ka-faa’iideystayaasha aan la garaneyn oo leh akoonnada bangiga ee Luxembourg iyo Baxrayn” intii u dhaxeysay 2011 iyo 2017.
“Waxaan u maleynayaa in dhibaatadu ay tahay inuusan jirin sharci run ah oo sharciga caalamiga ah,” ayuu yiri Kovalik, isagoo faallo ka bixinaya kiiska Beljamka. Qaabka ay dunidu u shaqeyso ayaa ah in wadamada awooda badan ay ku helaan waxa ay ku doonayaan xoog ama siyaabo kale. Eeg Galbeedka Yurub: waxaas oo dhan waxaa lagu dhisay dhabarka dadka ka socda wadamada saboolka ah oo leh agabkooda. Matxafyada Galbeedka Yurub ayaa gabi ahaanba kor u qaaday. qarniyadii hore dadyowga Afrika, Bariga Dhexe, wax walba waa laga xaday wax cusub ma jiraan.
‘Sharciga Waxba kuma Lahan’
Francis Boyle, oo ah borofisar sharciyada caalamiga ah ka dhiga Jaamacadda Kuliyadda Sharciga ee Jaamacadda Illinois, ayaa ka dhawaajiyay walaaca Kovalik isagoo sheegay in Washington iyo waddamada xubnaha ka ah NATO “ay ka xadeen hantida Libya iyo saliida meel kasta oo ay joogaan intii ay dileen Qaddaafi”. Sida laga soo xigtay isaga, “sharciga wax shaqo ah kuma lahan marka laga reebo in daaqado loogu labisto tuugooda”.
Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Canada iyo wadammada kale ee NATO ayaa burburiyey Libya dowlad ahaan, xasuuq ba’an oo ka dhan ah dadka reer Liibiya, waxay xadeen shidaalkoodii, waxayna haatan ku guda jiraan howlihii bililiqeysiga Liibiya. adduunka, ”ayuu borofisarku iftiimiyay.
Wuxuu soo jeediyay in siyaasiyiinta reer galbeedka ee ku lugta leh dagaalka Liibiya, oo uu ku jiro ra’iisul wasaarihii hore ee UK David Cameron iyo Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, “la maxkamadeeyo oo maxkamad la soo taago maxkamada dambiyada caalamiga ah dambiyada dagaalka, dambiyada ka dhanka ah aadanaha iyo xasuuqa”.
‘Tani waa mid Gabi ahaanba Sharci ah oo hoos timaada UN, EU ama UK Law’
Franco Rizzuto, oo ah borofisar sharciyada Yurub ku takhasusay oo ka tirsan jaamacadda Edge Hill, UK, ayaa leh mawqif ka duwan kan. Xisaabtiisa, “Canshuuraha waxaa aruurin kara HM Dakhliga iyo Kastamka halkaasoo hantida la la xayirey ee dadka loo cayimay loo sii deyn karo loona isticmaali karo iyada oo shati laga haysto Xafiiska Dhaqangelinta Dhaqangelinta Maaliyadeed (OFSI)”.
“Tani gebi ahaanba waa sharci sida uu qabo sharciga UN, EU ama UK,” ayuu yiri.
Si kastaba ha noqotee, wuxuu diiday fikirka ah in lacagta laga helo dulsaarka akoonada la hakiyey ee Qadaafi lagu wareejin doono dhibanayaasha argagixisada IRA, maadaama
Halkan ka daawo videoga
Previous articleArin Facebook niyad jabka ku ah iyo daraasad cusub oo xaqiijisay “runta “isticmaalka bara bulshada
Next articleDowladda Soomaaliya oo diiday in mar kale dib loo dhigo dhageysiga dacwadda badda ee hortaala ICJ
Lubnaan oo si xoog ah u gubatay iyo video lasoo dhigey...